Nezvedu - Inotevera Supply Chain
Kudonhedza ndeimwe yemhando dzakakurumbira dzemabhizinesi mazuva ano. Yakazvisimbisa pachayo seyakajeka basa ine yakaderera mari uye inoshanduka. Nekudaro, kumisikidza chitoro chepamhepo uye kuratidza zvigadzirwa zvako hazvina kukwana; kukwidziridzwa uye kugutsikana kwevatengi kunoita basa rakakosha kuita chero bhizinesi kuti ribudirire. Mumwe weakadai mupi webhizinesi, uyo anoita senzvimbo inoshanda yekumisikidza yako yemahara kudonhedza bhizinesi pasirese ndiyo Nextschain.
Nextschain yanga iri pakudonhedza amazon, ebay, aliexpress kwemakore manomwe. Isu tinotungamira zviuru zvevanopa mhando yepamusoro uye mafekitori muChina kupa zvinopfuura mazana mana emazana emhando yepamusoro zvigadzirwa zvekutengesa. Nextschain inobvumira vashandisi kutarisisa pane yekutengesa uye yekushambadzira chikamu, sevaya nyanzvi kugadzirisa manejimendi uye nzira yekutumira. Mutengo wavo wekutengesa wakanyanya kunaka mumusika, unovatendera kuti vawane purofiti yepamusoro uye kusimudzira mari yavo.
Nextschain ndomumwe wevashoma vanodonhedza vatengesi avo vanotumira maoda muhuwandu pasi rese nemitengo inodhura. Hunhu hwavo hwekuchengetera zvinhu hunogadziridza otomatiki uye vanotumira iwo maodha pachine panguva yepamusoro mwaka senge Nerusi Chishanu kana Kisimusi yekutakura panguva yakakodzera. Vazhinji vanopa masevhisi vanobhadharisa kudhinda ruzivo rekambani yemushandisi pane invoice. Nextschain inogonesa invoice yakagadzirirwa yemahara pane ese maodha.
Pamusoro pazvose, basa redu nderekubatsira mazhinji ebhizinesi kudzikisira mutengo uye kuchengetedza yakawanda nguva pane yavo E-commerce bhizinesi. Neyedu-yekumira kudonhedza mhinduro, isu tinobatsira kutenga zvinhu kubva kune vatengesi vedu, cheki yemhando yepamusoro, kurongedza mune yakanaka mamiriro uye nekugadzirisa ese ese ekutevera info. Zvinoitwa nevatengesi vedu kuteerera bhizinesi. Nemabasa epamusoro ekudonhedza NextsChain, vatengesi vanogona kutarisisa pahunhu pamwe nehunhu uye kusimudzira bhizinesi ravo.
Isu tinoedza kusangana nechinangwa ichi nekurerutsa chigadzirwa kutsvagisa kumusika uri kubuda wemamirioni ewebhu-based vatengesi vanopinda mukukanganisa kwekutanga uye / kana kukura bhizinesi rekutengesa.